मालामाल हुने गरी आदर्श लघुवित्तको आईपीओ आउँदै, कहिले हेर्नुहोस् ? - सिधा मिडिया
मालामाल हुने गरी आदर्श लघुवित्तको आईपीओ आउँदै, कहिले हेर्नुहोस् ?
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार १८:१३ मा प्रकाशित
287 जनाले पढ़िसके
IPO or Initial public offering on black block with blurred background
आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुगेको छ ।
लघुवित्तले ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ६० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न असोज २० गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो ।
लघुवित्तकाे गत असार ३१ गते सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीकाे ३० प्रतिशतले हुन आउने सो बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल रहेको छ ।
न्यादी हाइड्रोपावर आईपीओको प्रि अलटमेन्ट आज सम्पन्न, बाँडफाँट कहिले ?
न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि निष्काशन गरेको शेयर यहि साता भित्र बाँडफाँट हुने भएको छ । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोवल आइएमई क्यापिटले आज मंगलबार प्रि-अलटमेन्ट सकाएर यहि साता भित्र शेयर बाँडफाँट गर्ने जनाएको छ ।
कम्पनीको आईपीओमा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २३ लाख ५७ हजार १६६ आवेदनबाट २ अर्ब ९४ करोड ७७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ९४ लाख ७७ हजार ६५० कित्ताको लागि आवदेन परेको छ । यो सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको २० लाख ९२ हजार ५०० कित्ताको १४.०९ गुणा बढी हुन आउछ । मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार न्यूनतम १० कित्ताको दरले शेयर वितरण हुनेछ ।